TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game 3.1.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game
ဗားရွင္း 3.1.3 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
ဂိမ္းမ်ား စကားလံုး TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game
TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Want to playaunique word game? The Tap and Knock Off (TAKO) game is the answer,anew word building game where letters are not scrambled.
Createaword by eliminating required number of letters from the letter tiles. As the game progresses, the letter tiles increase from4to9and the required number of tiles to be eliminated increases from 1 to 6.
- 75,000+ Words
- 30 Levels of minute challenges
- Super League with 100 levels, hints and badges
- Unlimited games with7Challenges
- Multi-player games in Private and Public rooms
Hidden Feature (Revealed on 10.July.2017): Swipe to Knock Off subsequent letter tiles.
TAKO as many tiles, collect coins, top the Leaderboard and improve your spelling and vocabulary.
So, start playing this exciting FREE word puzzle game, all you need isa'Tap'.
New languages and word definition based challenges will be introduced in future updates.
The TAKO game is created by Digio TwentyOne Communications, where your game is our work.
For more details please visit our website www.thetakogame.com
တစ်မူထူးခြားတဲ့စကားလုံးဂိမ်းကစားလိုပါသလား? အဆိုပါပုတ်နှင့် (Tako) ဂိမ်းဟာ Off Knock အဖြေ, စာလုံးအလျင်အမြန်စေလွှတ်ကြသည်မဟုတ်ဘယ်မှာအသစ်တခုစကားလုံးအဆောက်အဦဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုစာအုပ်ကြွပ်အနေဖြင့်စာလုံးများ၏လိုအပ်သောအရေအတွက်ကိုဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်စကားလုံးတစ်လုံးဖန်တီးပါ။ ဂိမ်းတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှစာအုပ်ကြွပ်94 မှတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အုပ်ကြွပ်၏လိုအပ်သောအရေအတွက်က 1 ကနေ6တိုးဖယ်ရှားပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
- 75,000+ စကား
- မိနစ်စိန်ခေါ်မှုများ 30 Levels
- 100 အဆင့်အရိပ်အမြွက်နှင့်တံဆိပ်များနှင့်အတူစူပါလိဂ်
-7စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူ Unlimited ဂိမ်း
- အောင်မြင်မှုများ Unlock
- ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပြည်သူ့ခန်းထဲမှာ Multi-player ကိုဂိမ်း
နောက်ဆက်တွဲစာတစ်စောင်အုပ်ကြွပ်ဟာ Off Knock မှပွတ်ဆွဲ: (10.July.2017 အပေါ်ပျေါထှနျးခဲ့) Feature ကို Hidden ။
အဖြစ်အများအပြားအုပ်ကြွပ် Tako, ထိုအမှတ်သင်ပုန်းထိပ်ဆုံးနှင့်သင့်စာလုံးပေါင်းနှင့်ဝေါဟာရတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်းပါ။
ဒါကြောင့်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခမဲ့စကားလုံးပဟေဠိဂိမ်းကစားခြင်းကိုစတင်ပါကသင်သည်လိုအပ်သမျှတစ်ဦး '' ကိုအသာပုတ် '' ဖြစ်ပါတယ်။
နယူးဘာသာစကားများနှင့်စကားလုံးနှင့်အဓိပ္ပါယ်အခြေစိုက်စိန်ခေါ်မှုများအနာဂတ် updates များကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Tako ဂိမ်းသင့်ရဲ့ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းသည်အဘယ်မှာရှိ Digio TwentyOne ဆက်သွယ်ရေး, အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထားသည်။
အသေးစိတ်ကိုကြှနျုပျတို့၏ website www.thetakogame.com သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး
TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
bds-store စတိုး 2.08k 0
TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ TwentyOne Communications India
App Name: TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game
Release date: 2019-04-29 14:16:33
လက်မှတ် SHA1: 24:22:82:33:6E:BA:07:73:E8:69:4F:35:20:24:CA:2E:C4:AD:09:E7
TAKO - A Different Multiplayer Word Search Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ